Vanorwira Kodzero dzeVavhoti Vonyunyuta kuZEC Pamusoro peMitemo yeSarudzo
Vesangano re This Constitution Our Constitution Campaign vaendesa matsamba enyunyuto kumahofisi evesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC muBulawayo nekune mamwe maguta munyika vachinyunyuta pamusoro pemitemo yakasiyana-siyana ine chekuita nekunyoresa kwevanhu kuti vagokwanisa kuvhota.
Mutauriri weThis Constitution, Our Constitution Campaign VaAlfred Dzirutwe vaudza Studio 7 kuti vamiriri vesangano ravo munzvimbo dzakasiyana siyana munyika kusanganisira muBulawayo vaendesa magwaro enyunyuto, kana kuti petition vachipa zvichemo zvavo kumahofisi eboka reZimbabwe Electoral Commission.
VaDzirutwe vati zvimwe zvezvavari kunyunyuta inyaya yekuti vanhu vari kunzi vaunze magwaro anoratidza pavanogara kuti vagokwanisa kuvhota vachiti mutemo uyu unoita kuti vanhu vakawanda, kunyanya vechidiki vasakwanisa kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota.
VaNoble Mhlanga vanove mumiriri we This Constitution, Our Constitution Campaign kuGwanda vati vakwanisa kuendesa gwaro ravo renyunyuto kumahofisi eZEC mudhorobha iri rikatambirwa izvo zvinova zvaitwao naamai Langelihle Mpofu vanove mumiriri wesangano rimwe chete muguta reBulawayo.
Mukuru wesangano re This Constitution, Our Constitution Campaign, Muzvare Abigail Mupambi vati vapa veZEC kusvika musi wa20 wemwedzi uno kuti ivape mhinduro pamusoro pezvichemo zvavo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kune veZEC panyaya iyi.
Kuendeswa kwegwaro renyunyuto nesangano re This Constitution, Our Constitution Campaign kuri kuitika apo vechidiki vebato reMDC T vari kuti vachada kuratidzira pamahaofisi eZEC muHarare nemuBulawayo vachichema chemawo pamusorowo pemitemo yeZEC.
VaBrian Dube avo vanove mutauriri wevechidiki mubato reMDC T, uye variwo gweta rinorwira kodzero dzevanhu, vanoti hazvina maturo kuti veZEC vasimbirire pakuti vanoda kuti vanhu vave nemagwaro anoratidza kuti vanogara kupi kuti vagokwanisa kunyoresa sevavhoti.
VaButler Tambo vanove mutevedzeri wesangano reCentre for Public Engagement vachishanda nechikwata chemubatanidzwa we Platform for Leveraging Elections, Democracy and Governance kana kuti PLEDGE, vanoti hapana chavanoona chakaipa pakuti veZEC vati vanoda magwaro anoratidza kuti munhu anogara kupi.
Vamwe veruzhinji vari kuchema chema kuti veZEC havazi kugadzirira nekukasika nyaya yekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota vachiti boka iri rinogona kuzotadza kuita izvi nenzira yakanaka sezvo kwasara nguva shoma kuti sarudzo dzegore rinouya dziitwe.